C/raxmaan Faroole “Madaxweyne Xasan Sheekh waa inuu yimaadaa Gaalkacyo” (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/raxmaan Faroole “Madaxweyne Xasan Sheekh waa inuu yimaadaa Gaalkacyo” (DHAGEYSO)
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland haatana ka mid ah xildhibaanada cusub Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) ayaa ugu baaqay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu yimaado magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
C/raxmaan Faroole ayaa sheegay in xaaladda magaalada Gaalkacyo ay haatan mareeyso meel aad u xun, ayna jiraan tuhunno badan, taas oo uu ku sheegay in ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid aanu kaligiis waxba ka qaban karin, sidaasi darteed loo baahan yahay inuu Xasan Sheekh yimaado magaalada Gaalkacyo.
“Madaxweyne Xasan Sheekh waa inuu yimaadaa Gaalkacyo, maxaa yeelay waxyaabo badan baa jira uusan ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid kaligiis maareyn karin, waxaa jira tuhumo badan, si ay meesha uga baxaan tuhumadda siyaasadeed ee la isla dhex marayo, waa inuu Xasan Sheekh yimaadaa, oo xal kama dambeyn ah laga gaaraa arrinta Gaalkacyo” Sidaas waxaa yiri C/raxmaan Faroole.
Dhinaca kale, C/raxmaan Faroole ayaa sheegay in magaalada Gaalkacyo ay taariikh badan leedahay islamarkaana Xasan Sheekh looga baahan yahay inuu arrinkaan soo fara-geliyo, si tuhunadda siyaasadeed ee la isla dhexmaraayo meesha looga saaro.
“Hadii uusan Xasan Sheekh imaan Gaalkacyo, yaa xalinaayo hadii ay labada dhinac ismari waayaan, marka arrintaan waa lagama maarmaan, waa arrin Qaran ma ahan arrin laba maamul kaliya, ka maqnaashihiisa arrintaan waxaa loo qaadan karaa tuhumadda siyaasadeed ee la isla dhexmaraayo inay wax ka jiraan” Sidaas ayuu C/raxmaan Faroole hadalkiisa raaciyay.